Welding Machine and Accessory in Myanmar, | DO DO (Myanmar)
DO DO (Myanmar)
၀ရိန်စက်တစ်လုံးဝယ်ယူ အသုံးပြုတော့ မည်ဆိုရင် သိရှိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာများ တစ်ချို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
အိမ်သုံးမီတာနဲ့သုံးမှာလား? မီးစက်နဲ့သုံးမှာလား? ဆိုတဲ့ အချက်၂ချက်ကို ကြိုတင် ချိန်ညှိထားဖို့လိုပါသည်။ အိမ်သုံးမီတာ 220V နဲ့သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် မီးအား အဝင်ကောင်းရဲ့လား? အဝင်မီးအားငြိမ်ရဲ့လားဆိုတာကို သိရှိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မီးအားအဝင် 220V မှာ ငြိမ်နေတာများနေရင်တော့ ကိစ္စမရှိပေမဲ့ မီးအားအဝင်နည်းတဲ့အခါ အင်ဗာတာဆားကစ် ဝရိန်စက်အသုံးပြုသူများအတွက် မိမိစက်အနာသက်သာအောင် ပါးနပ်စွာ အသုံးပြုတတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။
မီးအား 190-200 V အတွင်းကျတဲ့အထိ ဝရိန်ချောင်းနံပါတ် (10) သုံးနေတာ ကိစ္စမရှိသေးပါဘူး။ အကောင်းဆုံးကတော့ (12) ချောင်းကိုသာ သုံးပေးရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ မီးအား 160-180V အထိ Output Current တောင့်တင်းတဲ့စက်တွေမှာ နံပါတ် (10) က အေးဆေး ရှိနေပါသေးတယ်။ 180 V အောက်ကျသွားပြီဆိုရင်တော့ ဝရိန်ချောင်း အသေးဆုံးကိုပဲ သုံးလေကောင်းလေပါပဲ။ 150-170 V အတွင်းမှာတော့ အထူးသတိပြုဆင်ခြင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
မီးစက်နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ မီးစက်မှာရှိသင့်တဲ့ KVA/KW အားကို ဝရိန်စက်အသုံးပြုရန် လိုအပ်တဲ့ KVA/KW ထက်ပိုမိုထားဖို့လိုပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိမိသုံးမယ့်မီးစက်တောင့်လေလေ ဝရိန်စက်ရွေးချယ်ရာမှာ ပိုမိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ ရွေးနိုင်လေပါပဲ။
မီးစက်ဖြင့်အသုံးပြုသည့်အခါ မီးစက်နိုးပြီး Volt အား ငြိမ်သက်ပြီဆိုမှသာ ဝရိန်စက်ပလပ်ထိုး အသုံးပြုပါ။ အသုံးပြုပြီးသည့်အခါ ဝရိန်စက်ပလပ်ဖြုတ်ပြီးမှသာ မီးစက်ကိုပိတ်ပါ။
MMA 250 MINI
MMA 250 I
MMA 250 IS1
MMA 250 IS4
MMA 300-I (380V)
Auto Welding Cover
Auto Welding Glass
Ceres Brand High Quality Drill Tools
JIG Saw ( လႊစက္ )
JIG Saw Blade ( လႊ )
ၾကိဳးထိုးစက္ ဆူးသြား Box
ပတၱား 14 " ၿဖတ္စက္
ပင္နီယံ 16" ၿဖတ္စက္
118 မ်ိဳး Tool Kit
Curved Air Blower (Corded)
သစ္သား၊ ေၾကြၿပား ၿဖတ္စက္
40 PCS Mini Grinder
100 pcs Grinding Box
Rebar Typing Machine
Snake Bit Extender
Electric Oil Well Pump
QB-70 ၃ မတ္
QB-80 ၁ ေကာင္
အဆင္႔ ၿမင္႔ အားၿပင္း ပန္ကာ
ပန္ကာ Height: 28" / 56"
DO DO (Myanmar) is proudly powered by WordPress